OwaseMbali osemncane nomcimbi wedlozi | News24
OwaseMbali osemncane nomcimbi wedlozi
Thando ‘PimpDlozi’ Khambule.ISITHOMBE : SITHUNYELWE
OWESILISA waseMbali osemncane noyisangoma uThando “PimpDlozi” Khambule uthi sekuyisikhathi sokuthi abantu bafundiswe ngedlozi, ikakhulukazi intsha.
UKhambule uhlele umcimbi wokufundisa ngedlozi owethiwe ngokuthi yi-First Umphithi Annual Mngoma Picnic nezobanjelwa e-Botanical Gardens mhla zingama-27 kuMfumfu (October) kusuka ngehora leshumi ekuseni kuya kwihora lesihlanu ntambama.
Lo mcimbi akusiwona owezangoma kuphela kodwa wonke umuntu wamukelekile ukuze kuzofundiswana ngendaba yedlozi.
Exoxa ne-Echo uKhambule uthe into emenze ukuba asukume kakhulu afune ukufundisa abantu ngedlozi yingoba akafuni ukuba abantu benze amaphutha awenza yena ngaphambi kokuba abe yisangoma.
“Mina ngikhule ngingalihloniphi idlozi ngingenandaba nalo ngingalinaki kwaze kwaba kufika isikhathi lapho lingishaya khona.
“Ngalahlekelwa yikona konke ngingasakwazi ngisho ukuthenga i-airtime ka-R10 indlela isimo esasisibi ngayo.
“Ngonyaka wezi-2014 ngalahlekelwa ngisho nawumsebenzi ngasala ngingenalutho nabangani bami baqala bangihlehlela ngoba ngasengifana nento engelutho.
“Ubaba wami uyena owangivula amehlo wangitshela ukuba kumele ngiyihlole le nto eyenzeka empilweni yami nokuyilapho engathola khona ukuthi nginabantu aba- dala.
“Nalapho ngesikhathi ngisaqala ukuthola angizange ngibe nendaba kwaze kwaba idlozi liyangithatha lingibukanisa nabantu ngabe sengihamba ngiya kothwasa ngaphothula ngonyaka wezi-2016,” ubeke kanje.
Uqhube wathi enye inhloso yalo mcimbi ukuzama ukuqeda umqondo wokuthi uma uyisangoma impilo yakho iphelele empephweni nje kuphela.
Uthe ufuna abantu bazi ukuthi usangaqhubeka uphile impilo yakho ngisho usuthathe indlela yokuba yisangoma.
“Abantu badinga ukwazi ngalezi zinto ukuze bengeke beloku beqhubeka nokubalekela idlozi ngoba kugcina sekubhimba izinto zabo eziningi.
“Ungathola abantu abaningi behleli ekhaya bethi abasebenzi kanti hhayi ngoba umsebenzi ungekho kodwa badinga nje ukuthi bazisondeze nedlozi balihloniphe bangaziqhelelanisi nalo.
“Uma uzisondeza nedlozi akusho ukuthi sekumele ube yisangoma kodwa kume wazi ukuthi likhona futhi kumele ulinake.
“Njengoba ngenze lo mcimbi angivelanga ngalala ngavuka nje ngathi ngizowenza kodwa kwafika idlozi kimina ngenyanga kaNtulikazi (July) langitshela ukuthi kumele ngenzele abantu bakini lo mcimbi esizothola ukufundisana kuwona ngedlozi.”
UKhambule uthe lo mcimbi usuzoqhubeka ube yinto yaminyaka yonke ukuze nalabo abasakhula bezokhula benolwazi bathole ukufundiswa ngedlozi.
Amathikithi alo mcimbi ayolakala ngo-R100 ePick n Pay kanti abantu bavumelekile ukuza nama-coolerbox abo ngemali engu-R50 abaziyikhokha khona e-Pick ‘n Pay. Ngeminye imininingwane ungaxhumana naye uKhambule enombolweni ethi: 076 674 5458.